Nyochaa Vernee M5: ụdịdị, atụmatụ, ọnụahịa, na foto | Gam akporosis
Oge a anyị na-ewetara gị a Vernee M5 nyocha, njedebe dị ala maka nke ahụ ọnụahịa dị nso na € 100 Ọ na-enye anyị ihe karịrị arụmọrụ na-atọ ụtọ maka ndị ọrụ ahụ anaghị achọ arụmọrụ dị elu. Ya sober imewe ọnụ na teknuzu ekike n'elu na-atụ anya (4 GB nke Ram, 64 GB nke ROM) -eme ka a na ngwaọrụ a-akpali nnọọ mmasị nhọrọ maka ndị chọrọ ka a mobile na-emefu karịa € 100. Ọ bụghị njedebe nke ga-eme ka onye ọ bụla nwee ịhụnanya kama na karịa karịa ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na njedebe na mpaghara a. Ka anyị hụ n'ụzọ zuru ezu njirimara ya, ike na adịghị ike ya.
1 Ngosipụta na imewe Vernee M5
2 Nka na ụzụ nke Vernee M5
3 Igwefoto Vernee M5 na onye na-agụ mkpịsị aka
4 Nwere ike na njikọta nke Vernee M5
7 Gallery Galili nke Vernee M5
Ngosipụta na imewe Vernee M5
La Ihuenyo M5 bụ sentimita 5.2 na IPS panel, mkpebi HD (1280x720p) na 2.5D curving na nsọtụ. Ọ bụ ezie na ndị nkịtị na-adịbeghị anya bụ 5.5-anụ ọhịa ọnụ, nke bụ eziokwu bụ na smartphones nke a size na-ukwuu na-achọ ndị ọrụ ndị na-adịghị mkpa a nnukwu ihuenyo na kama ekele mbenata price ka kacha. Ma obu ihe n’egosi, kemgbe njedebe ikpeazụ nke Vernee M5 bụ naanị gram 145 na aka ọ dị nnọọ mfe, ọ dị ka ọ dị ka ibu ya pere mpe.
Nhazi ahụ dị mfe mana ọ dị mma. Ọ bụghị njedebe nke ga-adọrọ mmasị anyị site n'onyinyo ya mana ọ na-enye anyị obere nhazi nke nwere naanị 6,9 millimeters buru ibu ma dịkwa oke kọmpat nke na-ezute ihe ndị ọrụ nke ụdị a na-achọ. The ụlọ dị na nwa ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ na agba, o nwere ọla dara ọ dịkwa ezigbo ụtọ imetụ aka.
Nka na ụzụ nke Vernee M5
Na ọkwa arụmọrụ, Vernee M5 na-enye ọtụtụ ihe karịa ihe ọ na-efu na ya 4 GB nke Ram na 64 GB nke ROM. Nke a yana ya MTK6750 Octa isi 64-bit processor Na-agba ọsọ na 1.5GHz, ARM Mali-T860 GPU na sistemụ arụmọrụ nke gam akporo 7.0 na-eme ka njedebe na-agba ọsọ nke ọma ma nwee ike ijikwa ngwa dị arọ dị mfe. Ọ dị mkpa iburu n'uche na sistemụ arụmọrụ dabere na gam akporo 7.0 Nougat ma tinye ihe ọhụrụ VOS nhazi akwa nke mepụtara site na Vernee.
Ka anyị lee nkọwa nke atụmatụ nke ihe nlereanya ahụ n'ụzọ zuru ezu:
Usoro njikwa Gam akporo 7.0 na VOS nhazi akwa
Ihuenyo 5.2 "IPS nwere mkpebi pixel 1280x720p na teknụzụ 2.5D
Nhazi MTK6750 Octa isi 64-bit na-agba ọsọ na 1.5GHz
Igwefoto na-aga n'ihu 13 mpx na FlashLED
Njikọ «SIM abụọ Bluetooth 4.0 WiFi GPS. Neti: 2G: GSM 850/900 / 1800MHz 3G: WCDMA 900 / 2100MHz 4G: FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz»
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpịsị aka mmetụta na azụ nke ọnụ - Idi nso ihe mmetụta - Accelerometer - Light mmetụta
Ahịa 100 euro na TomTop
Igwefoto Vernee M5 na onye na-agụ mkpịsị aka
M5 na-abịa nwere igwefoto igwe 13MPX nwere ọkụ ọkụ ọkụ yana oghere f / 2.0 nke na-enye ohere ịme foto dị mma, agba dị oke mma. Igwefoto dị n'ihu bụ 8 megapixels, karịa iji zuru onwe gị. Ihe mkpisi aka na-agụ dị n'okpuru igwefoto bụ isi ma tinye 360º mmata na ọsọ nke 0.1 sekọnd.
Nwere ike na njikọta nke Vernee M5
Site na mkpọ batrị 3.300 mAh, Vernee M5 na-enye a ikike nke 10 ụbọchị na ọnọdụ njikere na awa 13 na-eji ike ọgwụgwụ. Na ọkwa njikọta, ọ gụnyere WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0 na GPS, yana ntinye micro micro 2.0 na ntinye 3.5mm maka ekweisi.
4 GB nke Ram na 64 GB nke ROM
Nanị ngosipụta ziri ezi
Gallery Galili nke Vernee M5
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Vernee M5 nyocha
mgbịrịgba eugenio dijo
ezigbo edemede ,,
Zaghachi ka eugenio campana